Code - L3 #ချည်​သား အ​ရောင်​ - ဖြူ / ပန်း Price - 9500 ဖုန်း Mpt - 09420668442 Tel - 09773304421 လိပ်​စာ အမှတ်​ ၁၃၂၊ ၄လွှာB၊ ဗဟိုလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်​၊ သဇင်​​ကြေးအိုး အ​​ပေါ်ထပ်​၊BRB မှတ်​တိုင်​
Code L4 Price - 7000 Color - ဖြူ / ပန်း / စိမ်းနု #ချည်​သား ဖုန်း Mpt - 09420668442 Tel - 09773304421 ပို.ခ 1000 / 1500 / 2500 ဆိုင်လာကြည့်ရန် အမှတ်​ ၁၃၂၊ ၄လွှာB၊ ဗဟိုလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်​၊ သဇင်​​ကြေးအိုး အ​​ပေါ်ထပ်​၊BRB မှတ်​တိုင်​
Code - L 11 Price - 10500 အ​ရောင်​ - ပုံပါအတိုင်း #​ရေခဲသား ဖုန်း Mpt - 09420668442 Tel - 09773304421 ပို.ခ 1000 / 1500 / 2500 ဆိုင်လာကြည့်ရန် အမှတ်​ ၁၃၂၊ ၄လွှာB၊ ဗဟိုလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်​၊ သဇင်​​ကြေးအိုး အ​​ပေါ်ထပ်​၊BRB မှတ်​တိုင်​
Code - L2 Price - 7500 Color - ပန်း ၊ ခဲ #​ရေခဲသား ဖုန်း Mpt - 09420668442 Tel - 09773304421 ပို.ခ 1000 / 1500 / 2500 ဆိုင်လာကြည့်ရန် အမှတ်​ ၁၃၂၊ ၄လွှာB၊ ဗဟိုလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်​၊ သဇင်​​ကြေးအိုး အ​​ပေါ်ထပ်​၊BRB မှတ်​တိုင်​
Code - L8
Code - L8 Price - 11500 Color - ပုံပါအတိုင်း #အကျီ င်္ #​ဘောင်းဘီ #ပုဝါ #​ရေခဲသား ဖုန်း Mpt - 09420668442 Tel - 09773304421 ပို.ခ 1000 / 1500 / 2500 ဆိုင်လာကြည့်ရန် အမှတ်​ ၁၃၂၊ ၄လွှာB၊ ဗဟိုလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်​၊ သဇင်​​ကြေးအိုး အ​​ပေါ်ထပ်​၊BRB မှတ်​တိုင်​
Travel Selection Items
ခရီးသွားရာမှာ ဖြစ်စေ၊ အိမ်မှာ အိပ်မပျော်လို.ဘဲ ဖြစ်စေ Items အသေး သုံးခုပေါင်းပေးထားတဲ့ Travel Items လေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ အိပ်ရာမှာ အဆင်ပြေစေရန် မျက်စိကို မှောင်စေဖို. မျက်လုံးပိတ် ဆူညံမှုကို အေးချမ်းစေမယ့် နားပိတ် အိပ်ဖို. အဆင်ပြေစေမယ့် ခေါင်းအုံးလေး ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းအုံးလေးက လေထိုး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေးထိုး အတံလေး ဝယ်ရန် http://www.rocketonlineshopping.com/pr…/mini-air-compressor/ ဈေးနှုန်း - ၉ထောင် Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
ဟိုတယ်သုံး SLIPPER WAFFLE
ဟိုတယ်၊မိုတယ် နှင့် အဆင့်မြင့် တည်းခိုခန်းများတွင် အသုံးပြုသော အခန်းတွင်းစီး ဖိနပ်အမျိူးအစားဖြစ်သည်။နူးညံသော အထိအတွေ့နှင့် အဖြူရောင်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုအပြင် စိတ်ကျေနပ်မှုပါ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။အဆိုပါ အခန်းတွင်းစီး ဖိနပ်ကို စီးထားခြင်းကြောင့် အညောင်းပြေခြင်း၊ချော်လဲခြင်း မှ ကာကွယ်နိုင်ခြင်း နှင့် စီးရတာ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေခြင်း အစရှိသော စိတ်ကျေနပ်မှုများ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရောင် နှင့် တံဆိပ်ကို စိတ်တိုင်းကျ သည့်အထိ Order များ ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ဖိနပ် size ကို Free size ထားပေးသောကြောင့် မည်သည့်အရွယ်အစား နှင့်မဆို လိုက်လျောညီထွေမှု ပေးနိုင်သည်။
ဟိုတယ် နှင့် အိမ်သုံး MATTRESS PROTECTOR
3 Star ,5star ရှိ အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်ကြီးများတွင် အသုံးပြုသော မွေ့ယာအပေါ်တွင် တစ်ဆင့်ခံ အသုံးပြုရသော mattress protector တစ်ခုဖြစ်သည်။အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နိုင်ပြီး ဖြုတ်၍ လျှော်ဖွတ်နိုင်သည်။သင့်၏ တန်ဖိုးကြီးသော မွေ့ယာများ ပေါ်တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အစွန်းထင်းခံနိုင်ခြင်း၊ ဖြုတ်-တပ် ရ လွယ်ကူခြင်း၊ အလွယ်တကူ လျှော်ဖွတ် နိုင်ခြင်း၊ အသစ်တိုင်းပြန်လည် အသုံးပြု နိုင်ခြင်း အစရှိသော အကျိူးကျေးဇူးများ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုကြောင့် ကြာရှည်အသုံးခံပြီး အလွယ်တကူ စုတ်ပြဲခြင်းများ မဖြစ်နိုင်ပါ။အပူစုတ်ယူပေးနိုင်စွမ်း ရှိသောကြောင့် ကျောပူခြင်း မှလည်း ကာကွယ်တားဆီးနိုင်သည်။
ကလေးတွေ ကြိုက်စေမယ့် Snuggie Tails စောင်များ ရရှိပါပြီ။ ချစ်စရာ တိရစ္ဆာန် ပုံစံလေးများနဲ. စောင်များ ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်ဖို. ဖြစ်စေ၊ အိပ်ရာဝင် ပုံပြင်များပြောပြစဉ် ဖြစ်စေ ခလေးတွေ ကြိုက်ကြမယ့် စောင်ဖြစ်တာကြောင့် အေးအေးလေးမှာ စောင်ခြုံဖို. ပြောစရာ လိုတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါ။ ဈေးနှုန်း - ၁သောင်း ၉ထောင် Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
သက်မွန်သုံးမိတ် ချင်းရိုးရာ ချည်ထည်းများ
ဒါလေးကတော့ ဒီဇိုင်းနောက်တစ်မျိုးနဲ့ သက်မွန်သုံးမိတ်လေးပါရှင့်။ အဆင်လည်းလှသလို ဒီဇိုင်းလည်းလှတာကြောင့် ဝတ်ထားလျှင် ဆန်းလည်းမဆန်းသလို ရိုးလည်းမရိုးတာကြောင့် လူကြားထဲထင်ပေါ်စေမှာပါနော်။ ❤️❤️❤️Welcome From Wah Ngwe Thway ❤️❤️❤️ Contact us from Facebook message box or Viber and Phone +959 254028251, 09798743396, Home Phone 01 9000742 We use EMS shipping System and Myanmar Post for oversea Customers. အထည်အားလုံး Instock ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံပေါင်းစုံကို EMS Shipping System ဖြင့်အိမ်အထိ ပို့ဆောင်ပေးပြီး၊ နယ်မြို့များသို့ ၁၂ နာရီမတိုင်ခင်ငွေဝင်ပါက ညကားဖြင့်ဂိတ်သို့ပို့ပေးပါသည်။ ၁၂ နာရီကျော်ပါက နောက်နေ့ကားဖြင့်ပို့ပေးပါသည်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်း မည်သည့်မြို့နယ် မဆို မှာယူပြီး သုံးရက်အတွင်း ပို့ပေးပြီး ပစ္စည်းရောက်မှ ငွေချေရပါသည်။ မင်္ဂလာဈေး ယုဇန ပလာဇာ ရှိ ကားဂိတ်များမှ တဆင့် နယ်ဖောက်သည်များကို ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ကားဂိတ်ပို့ခပေးရန် မလိုပါ လက္ကားသမားများအတွက်ပါရှင့်။ မှတ်ချက် ။ ။ အဆင်တူပစ္စည်းများ ပစ္စည်းပြတ်နေသည့်အခါ ပြန် လည်မှာယူလိုပါက တပါတ် အနဲဆုံးစောင့်ရပါမည်။ Address။ ။ တိုက်B2(202)နှင်းဆီလမ်း သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်။ လိုင်းကားနှင့် လာပါက လမ်းကျယ် ပလာဇာ မှတ်တိုင် ဆင်းပါရှင့် ယုဇနပလာဇာကားပါကင်ဘေးလမ်း မှဝင်ပါရှင့်။
ယောပုဆိုး ချင်းရိုးရာ ချည်ထည်းများ
ယောပုဆိုး ရောင်စုံလေးတွေရောက်မယ်နော် ချစ်တို့ရေ ❤️❤️❤️Welcome From Wah Ngwe Thway ❤️❤️❤️ Contact us from Facebook message box or Viber and Phone +959 254028251, 09798743396, Home Phone 01 9000742 We use EMS shipping System and Myanmar Post for oversea Customers. အထည်အားလုံး Instock ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံပေါင်းစုံကို EMS Shipping System ဖြင့်အိမ်အထိ ပို့ဆောင်ပေးပြီး၊ နယ်မြို့များသို့ ၁၂ နာရီမတိုင်ခင်ငွေဝင်ပါက ညကားဖြင့်ဂိတ်သို့ပို့ပေးပါသည်။ ၁၂ နာရီကျော်ပါက နောက်နေ့ကားဖြင့်ပို့ပေးပါသည်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်း မည်သည့်မြို့နယ် မဆို မှာယူပြီး သုံးရက်အတွင်း ပို့ပေးပြီး ပစ္စည်းရောက်မှ ငွေချေရပါသည်။ မင်္ဂလာဈေး ယုဇန ပလာဇာ ရှိ ကားဂိတ်များမှ တဆင့် နယ်ဖောက်သည်များကို ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ကားဂိတ်ပို့ခပေးရန် မလိုပါ လက္ကားသမားများအတွက်ပါရှင့်။ မှတ်ချက် ။ ။ အဆင်တူပစ္စည်းများ ပစ္စည်းပြတ်နေသည့်အခါ ပြန် လည်မှာယူလိုပါက တပါတ် အနဲဆုံးစောင့်ရပါမည်။ Address။ ။ တိုက်B2(202)နှင်းဆီလမ်း သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်။ လိုင်းကားနှင့် လာပါက လမ်းကျယ် ပလာဇာ မှတ်တိုင် ဆင်းပါရှင့် ယုဇနပလာဇာကားပါကင်ဘေးလမ်း မှဝင်ပါရှင့်။
တီးတိန်ဒီဇိုင်း ချင်းရိုးရာ ချည်ထည်းများ
တီးတိန်ဒီဇိုင်းစုံ စုစည်းမှုလေးပါရှင့်။ဆေးကျွတ်ခြင်းရေကျုံ့ခြင်းမရှိဘဲဝတ်ဆင်လိုက်သူတိုင်းအဆင်ပြေစေမဲ့တီးတိန်အဆင်လေးပါရှင့်။ ❤️❤️❤️Welcome From Wah Ngwe Thway ❤️❤️❤️ Contact us from Facebook message box or Viber and Phone +959 254028251, 09798743396, Home Phone 01 9000742 We use EMS shipping System and Myanmar Post for oversea Customers. အထည်အားလုံး Instock ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံပေါင်းစုံကို EMS Shipping System ဖြင့်အိမ်အထိ ပို့ဆောင်ပေးပြီး၊ နယ်မြို့များသို့ ၁၂ နာရီမတိုင်ခင်ငွေဝင်ပါက ညကားဖြင့်ဂိတ်သို့ပို့ပေးပါသည်။ ၁၂ နာရီကျော်ပါက နောက်နေ့ကားဖြင့်ပို့ပေးပါသည်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်း မည်သည့်မြို့နယ် မဆို မှာယူပြီး သုံးရက်အတွင်း ပို့ပေးပြီး ပစ္စည်းရောက်မှ ငွေချေရပါသည်။ မင်္ဂလာဈေး ယုဇန ပလာဇာ ရှိ ကားဂိတ်များမှ တဆင့် နယ်ဖောက်သည်များကို ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ကားဂိတ်ပို့ခပေးရန် မလိုပါ လက္ကားသမားများအတွက်ပါရှင့်။ မှတ်ချက် ။ ။ အဆင်တူပစ္စည်းများ ပစ္စည်းပြတ်နေသည့်အခါ ပြန် လည်မှာယူလိုပါက တပါတ် အနဲဆုံးစောင့်ရပါမည်။ Address။ ။ တိုက်B2(202)နှင်းဆီလမ်း သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်။ လိုင်းကားနှင့် လာပါက လမ်းကျယ် ပလာဇာ မှတ်တိုင် ဆင်းပါရှင့် ယုဇနပလာဇာကားပါကင်ဘေးလမ်း မှဝင်ပါရှင့်။
ရေချိုးခန်းသုံး ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ရေချိုး ဝတ်ရုံ ( Bathrobe )
NTS Myanmar ကုမ္ပဏီမှ အရည်သွေးကောင်းမွန်သော လီနင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရေ ချိုးဝတ်ရုံကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက် ရှိပါသည်။၄င်းသည် လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်၊ ဟိုတယ်တို့ တွင်ရှိသော ရေချိုးခန်းသုံး ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပီး လူကြီးမ င်းတို့ အတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော ရေချိုးဝတ်ရုံ ( Bathrobe ) ဖြစ်ပါသည်။အရည်သွေးေ ကာင်းမွန်သော လီနင်သာတို့ ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အလွ န်အသုံးဝင်သော ရေချိုးခန်းသုံး ပစ္စည်း ရေချိုးဝတ်ရုံကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူ ကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်းရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်း ရေချိုးဝတ်ရုံကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက NTS Myanmar ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် စပန့်လုံချည်လေးနဲ့ t.shirt ပြောင်လေးတွေ
ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် စပန့်လုံချည်လေးနဲ့ t.shirt ပြောင်လေးတွဲဝတ်ပြီ ဈေးဝယ်ထွက်လို့ရပါပြီရှင့်။ နွေရာသီရောက်လို့ အပူချိန်တွေမြင့်လာလည်းစိတ်စရာမလို လွတ်လပ်စွာဝတ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ Cotton, lacquer ware, jade , wood crafts, (tapestry) shwe chi htoe, bamboo crafts , pathein umbrella များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ဝယ်ယူအားပေးကြသော မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ် Customer များကို GOLD CLASS COTTON HOUSE မှ ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။
ခေါင်းအုန်းပါမယ့် လေထိုးမွေ.ယာ (PreOrder)
ခရီးအမြဲထွက်သူများအတွက် ခေါင်းအုန်းပါမယ့် လေထိုးမွေ.ယာလေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ လေထိုးတံဖြင့် အလွယ်တကူ ထိုးနိုင်ပါမယ်။ အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး ခရီးသွားရာမှာ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဖြစ်စေမှာပါ။ အရောင် နီ၊ ပြာ၊ မဲ Name: 21 Automatic Inflatable Pad Size: 190 * 60 * 5cm The actual available size: (190 ~ 195) * 60 * (4 ~ 5) cm (gas charge and more will be less asacertain error, manual measurement ofasmall error, Material: 190T Pongee Built-in: High-grade Sponge Color: Blue Ash, Red Ash, Black Ash Features: 5cm thick, Can fight each other, The pillow blowing Packing list: 1 * Inflatable Cushion ဈေးနှုန်း 90000 kyats (Delivery free in Yangon) ၂ပတ်စောင့်ရပါမယ်။ (PreOrder) လေထိုးအတံ - ၂သောင်း၅ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ အားလုံးကို အိမ်အရောက်ပို.ခ ၃ထောင်ကျပ်ပါ။ တခြားမြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 09784419691 09768484878 ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
ပျိုမေတို့အတွက် ချည်ပိတ်ဖောက်ဇာ ပုံစံအမျိုးမျိုး နှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ ဆန်းသစ်သည့် ဒဇိုင်းနဲ့ အရောင်းအသွေးစုံလင်စွာရရှိနိုင်ပါသည်။ Cotton, lacquer ware, jade , wood crafts, (tapestry) shwe chi htoe, bamboo crafts , pathein umbrella များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ဝယ်ယူအားပေးကြသော မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ် Customer များကို GOLD CLASS COTTON HOUSE မှ ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။